Vaovao - Navoaka soa aman-tsara ny bulldozer SD7N nasain'ny mpanjifa Ghaneana
Tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2021, misy tsena any ampitan-dranomasina misy fironana midina voan'ny areti-mandringana. Manoloana ny fahasahiranana, ny departemanta iraisam-pirenena SHEHWA dia mbola nanitrikitrika ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa ivelany hanatanteraka dokambarotra feno eo amin'ny tsena eo an-toerana, handray anjara mavitrika amin'ny tolo-bidy, ary hanaraka ny fizotran'ny tetikasa nahemotra am-piandohana. Taorian'ny ezaka tsy nisy tohiny dia niavaka tamin'ny fifaninanana imbetsaka izahay ary nahazo baiko maro nifandimby. Ny fandrosoana ny tetikasa teo aloha dia nahitana fandrosoana lehibe koa, anisan'izany ny tetikasa bulldozer SD7N any Ghana.
Amin'ny maha masoivohon'ny milina fananganana manana fitaomana lehibe any Ghana dia niatrika fifaninanana avy amin'ny Shantui, Zoomlion ary marika hafa hatrany ny departemanta iraisam-pirenena SHEHWA isaky ny mifampiraharaha amina mpanjifa ganeana vaovao. Noho ny tombony ara-teknika tena tsara dia namono marika hafa ny orinasanay ary nahazo ny baiko. Nandritra ny taona faramparany, mba hanamafisana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa Ghanian, ny orinasanay dia nandamina fiofanana ho an'ny tsenan'i Ghana, izay nahazo fiderana lehibe avy amin'ny mpanjifa ary nametraka fototra mafy orina ho an'ny fampandrosoana maharitra eo amin'ny mpanjifa Ghana sy Departemanta iraisam-pirenena SHEHWA.
Mandritra ny fizotran'ny fampiharana manokana ity kaomandy SD7N ity, satria tena tery ny ora fanaterana dia mandray andraikitra haingana ny departemanta rehetra amin'ny hafainganam-pandeha haingana indrindra. Noho ny fiaraha-miasa feno amin'ireo ora mihoatra ny atrikasa, ny bulldozer dia voaterina ara-potoana ihany amin'ny farany.